Semalt Inikeza Izinkinga Eziwusizo Ku-Top 5 Scrapers Web
Ngokuvamile, ulwazi esikudingayo luboshwe esakhiweni, futhi ayikwazi ukuyiqhafaza noma ukuyikhahla kahle. Ngenkathi amanye amasayithi enza imizamo yokwethulwa kwedatha kumafomethi ahlanzekile futhi ahlelekile, abanye abakwazi ukuhlinzeka noma yikuphi ukukhwabanisa kwewebhu noma indawo yokukhwabanisa idatha. Yingakho kuzodingeka ukuthi sifinyelele abakwa-web crawlers abahamba phambili, abavukuzi kanye neziqhumane. Lapha siye saxoxa ngamathuluzi amahlanu aphezulu kulokhu - fotos modelos profesionales mujeres.
I-Webhose.io isenza sithole idatha yesikhathi sangempela kusuka kumithombo ye-inthanethi namasayithi. Ingxenye engcono kakhulu ukuthi le migodi yezinhlelo futhi idonsa izingosi ngokushelelayo futhi inikeze idatha efomethi ehlanzekile nehlelekile kahle. Kusenza sikwazi ukukhipha idatha ngokusekelwe kwamagama angukhiye, imishwana, izilimi, nemvelo. Imiphumela yokugcina ingatholakala ngesimo samafayela we-XML, RSS ne-JSON. Yize lolu hlelo lungabizi izindleko, ungafinyelela inguqulo yayo ye-premium uma ufuna ukusebenzisa iWebhose.io ngenjongo yokuthengisa. Uhlelo olukhokhelwe luzokwenza ukwazi ukuthumela izicelo eziningi ze-HTTP kwisiphakeli esiyinhloko, okwenze kube lula kuwe ukuthi ushaye futhi ushaye amasayithi.
I-Scrapy iyinhlangano enamandla futhi emangalisayo yokwehla nokuhleleka kwe-intanethi. Ingxenye yayo engcono kakhulu ukuthi lolu hlelo lusekelwa umphakathi wezazi, ongangena nabo ekuthinteni amathiphu awusizo futhi
3. Ibhulogi lokukhwabanisa:
Uma ungakhululekile ngamakhodi, Ukukhipha i-Outwit I-Hub izokunikeza isikhombimsebenzisi esibonakalayo esiwusizo, okwenza kube lula kuwe ukuthi ukhanyane futhi ulandele idatha. Inguqulo yayo eyabanjwe itholakala kwisayithi elisemthethweni, futhi inguqulo yamahhala ingalandwa kusuka kunoma isiphi isitolo se-inthanethi. I-Outwit Hub iyisandiso se-Firefox
Uma unayo i-Google Chrome njengesiphequluli sakho sewebhu esikhulu, kufanele ukhethe i-Web Scraper. Kuyindlela evelele yokukhwabanisa neyokumbiwa kwemigodi evumela ukuthi udale ama-sitemaps kokubili amabhulogi akho kanye namawebhusayithi webhizinisi. Kumele ulande, faka futhi wengeze lesi siphequluli kusiphequluli sakho se-Chrome ubone ukuthi uzokhipha kanjani idatha kusuka kumawebhusayithi wakho anikeziwe. Ungaphinda ungenise izindawo ze-sitemaps noma usebenzise izifanekiso zawo ukuthuthukisa ukubukeka nokusebenza kwewebhu lakho. Izosindisa idatha yakho ekhishwe kumafayela e-CSV noma kufolda yayo ye-Archive.